Edwin Van Der Hoeven - Daweynta, Dareenka, Dhex-dhexaadka
"Dhamaantiin waa ka badan yihiin wadarta qeybaheeda"
Imtixaanka qaado oo naftaada raadso
DIB-U-DHEX GALIN & DULMI
Soo dejiso layliyada (bilaashka ah) adiguna waaya aragnimo u leedahay
Maxaa kuu diidaya inaad xaqiijiso riyadaada?
QIIMEYN IS-QAAD & ABUUR
Baro luqada ay naftaadu ku hadlayso
Xiriirka adduunka aan la arkin
Waxaan rajeynayaa inaad ka heli doonto waxaad ka raadineyso boggan. Waxaa loo dejin karaa waxoogaa ka duwan sidaad filayso ama looga bartay dhexdhexaad ama tababare. Runtii ma aaminsani in aan gashanayo dabool leh odhaahda waxaan ahay dhexdhexaad hadda ka dibna mar labaad xiisaha xiisaha leh. Wax walba way isku xidhan yihiin waxaanan ka soo qaadanayaa dhiirrigelinta qaybaha kala duwan ee nolosha.
Waxaan sidoo kale tan kula arkaa kaqeybgalayaasha in la ii ogolyahay inaan hago arin noloshooda ku saabsan. Waxay u yimaadaan inay ka shaqeeyaan X laakiin waxay ogaadaan in Y dhab ahaantii fiiro gaar ah la siiyo. Hadiyada taasi waa inay la kulmaan natiijooyin wax ku ool ah dhammaan dhinacyada noloshooda. Oo waa sax! Waxba kalama jiraan oo sidaas darteed sawirka buuxa waa muhiim. Markaa ka dib nolosheennu si buuxda ayey u magooli kartaa.
Dhamaanteen waan ka badan nahay wadarta qeybaheeda! Qof ahaan, xiriir ahaan, qoyskaaga ama asxaabtaada iyo asxaabtaada.
Facebook-f LinkedIn Twitter Dhexdhexaad Pinterest Youtube
Qorshe B - Bitcoin mustaqbalkeena
Waa kuma Edwin?
Fikirka iyo miyirka
Qaababka aasaasiga ah ee 2
Si fiican ugaga taxadar cudurada maskaxda
Isafgardhigida bogsashada oo leh resonance of moon buuxa
Mantras oo ka yimid Budhiism
The "Vajra Guru" mantra ka Padmasambhava
7 chakras ee jirkeena ether
Isweydaarsiga shacbiga aasaasiga ah ee chakra
Isweydaarsiga xifdinta Sacudi Carafta
Isweydaarsiga fekerka wadnaha ee chakra
Ka fikirida cufnaanta cufan ee chakra
Isweydaarsiga dib-u-eegista indhaha chakra saddexaad
Ka fiirsashada qoob ka ciyaarka ee chakra chakra
Qof Xasaasi ah (HSP)
HSP - Feejignaanta Dareenka Sare
5 astaamaha Qofka Dareenka Sare leh
Ma waxaad tahay qof aad xasaasi u ah? Qaado imtixaanka hsp
Dareenka sare ee goobta shaqada
5 talanti oo ah shaqaalaha aadka xasaasiga u ah
Samee wadatashi dhexdhexaad ah
Bixiso caddeyn iyada oo loo marayo garasho-dareen-cad
Bogsiinta, hadalka iyo farshaxanka oo loo maro Tijaabada
Edwin van der Hoeven CSNU, oo ah dhexdhexaad diimeed
Xiriirka iyo sicirka
Wax alaab ah kuma jiraan gaarigaaga wax iibsiga
Edwin van der Hoeven - HSP / xasaasiyad sare, ruuxiyan iyo dhexdhexaadnimo
Sida Buddhistu tiraahdo: dadka oo dhan waxay wadaagaan hal shay oo ah 'raadinta farxad'. Qeexitaanka farxaddu waxay leedahay muujinta shaqsiyadeed oo badan; lacag badan, muuqaal qurxoon, lamaane macaan, guul, caafimaad wanaagsan, xorriyad, hal-abuur iwm.
Farxad waad ka raadsan kartaa naftaada gudaheeda ama naftaada gudaheeda.
Dad badan oo ku nool dunida Galbeedka waxay diiradda saaraan farxad ka baxsan naftooda, si kastaba ha noqotee, waayo-aragnimadu waxay muujineysaa in tani badanaa ay bixiso qanacsanaan ku-meel-gaadh ah oo aad si dhakhso leh u bilawdo raadinta gujinta xigta. Waa markaad kobciso farxadda gudaha inaad leedahay a gobolka ahaanshaha taasi waa jacayl iyo firfircooni, waxay dareenkaaga ku haysaa feejignaan waxayna siisaa dhiirrigelin guul shaqsiyeed.
Duruufahaaga dibadda ayaan gebi ahaanba kaaga tegayaa. Waan ku faraxsanahay inaan kaa caawiyo beeritaanka gudaha ee farxadda, tababarka maskaxda iyo luqadda dareenkaaga.
Inbadan ayaan ogahay? Waxaad timid meeshii saxda ahayd ... jacayl, Edwin
Tababar shaqsiyeed 85 € / 90min.
Miyaad wax ku qabsataa shaqada, ma dhib baa inaad ka hadasho waxa ku saabsan dareenkaaga ama ma waxaad dooneysaa xoogaa taageero ah oo ku saabsan horumarkaaga shakhsi ahaaneed ama xagga ruuxiga ah? Waan kaa muraayadinayaa, waxaan kaa riixayaa aaggaaga raaxada ee ay lagama maarmaanka u tahay waxaanan kaa caawinayaa inaad naftaada u eegto qaab wanaagsan oo wax dhisaya.
Wadatashi dhexdhexaad ah 50 € / 45min.
Dhexdhexaad ahaan, oo ay caddeeyeen SNU, waxaan ku siinayaa la-tashiyo ku saleysan habka Ingiriiska. Tan macnaheedu waa inaadan keenin waxyaabo sida sawirro ama dahab. Waxaan xiriir la sameeyaa kan doonaya inuu kala xiriiro Dunida Ruuxiga ah waxaanan u siiyaa tan caddayn badan intii suurtagal ah si meesha looga saaro shaki kasta.
Bogsiinta ruuxiga ah 20 € / 25min.
Khibrad u yeelo saameynta iftiiminta ee bogsiinta ruuxiga ah naftaada. Daaweyntu waxay qaadataa qiyaastii 25 daqiiqo oo aan la socdo adduunyada ruuxiga ah si aan ugu gudbiyo bogsashada.
Macluumaadka ku saabsan qiimo dhimista sicirka waxaa laga heli karaa halkan.
Bitcoin iyo ruuxi ahaanta ganacsiga
27 Sebtember, 2020
Ruuxnimada iyo arrimaha lacagta mararka qaar waxaad moodaa inay is khilaafsan yihiin. Fiidiyowgan ugu horreeya waxaan ku sharxayaa inaad runtii wax badan ka baran karto naftaada markaad ka ganacsanayso saamiyada ama kaydka. Waxay ku baraysaa dulqaad, diirad saarid, cabsi, istiraatiijiyad iyo sifooyin badan oo badan oo faa'iido kuu yeelan kara nolosha.
Deeqsinimadu waa inay ku qulqulato wakhtiyada qalalaasaha jira
Lacagtu waa sida biyo oo waa inay si xor ah u socdaan. Binu-aadamku kaliya waa xarun dhexdhexaad ah oo ku jira bartan-joogta ah. Sidaa daraadeed, deeqso deeqsinimada si aad u oggolaato dabiicadda inay shaqadeeda qabato.
Diinta saxda ahi waxay ku saabsan tahay aaminaadda
Kalsoonida waxaa lagu muujiyaa farxad aan waligeed dhammaanayn in wax walba ay u wanaagsan yihiin sidii ay ahaan lahaayeen. Waxa kaliya ee aad sameyn kartaa hadda waa inaad ka warqabtaan nolosha.
Dareenka waa tikidhadaada nolol hal abuur leh
18 Maarso, 2020
Dareenkayagu waa hab lagu qaabeeyo isku xirnaanta iyo cabbirrada miyirka iyo nolosha. Maxaad u xiisaynaysaa? Markii ay miyir-qabeenkeenu sarreeyo, ayaa ah inta aan awoodno inaan qaabeyno nolosheena. Sidan ayaad u isticmaali kartaa dareenkaaga si aad ugu noolaato nolol quruxsan oo hal abuur leh.
Aragti aad u xasaasi ah
Miyaad aad u xasaasi tahay? Kadib maskaxdaadu waxay ku shaqeysaa macluumaad xasaasi ah oo aad si qoto dheer ugu milicsato. Khibradaada dareenka waa mid aad u kacsan, ka murugsan, fowdo badan oo waxaad si dhaqso leh u la kulantaa wax cusub ama cusub; waxaad ka kicin badan tahay kicinta marka loo eego qofka caadiga ah.
Meel aad ku gaadhay meesha dareenkaagu gaadho
8 Janawari, 2020
Waxaad tahay qof diyaar ah oo dulqaad badan
10 Luulyo, 2019
Waa kuma ama HSP?
9 su'aalo badanaa la isweydiiyo
Fikirka & wacyiga
Markuu qofku ka hadlo horumarka miyirka markaa fekerku waa 'gobolka miyirka'. Xaaladda miyir-qabka ee dareenkan ayaa ka gudubta dhaqammada na siiya habab lagu gaaro gobolka ahaanshaha inuu yimaado. Sanadihii la soo dhaafay anigu badanaa ma baran dhaqamada gaarka ah, laakiin habab lagu gaaro xaalad miyir-qab ah oo miyir qab ah. Intaa waxaa sii dheer, waxaan dadka ka caawiyaa inay la kulmaan awoodda suugaaneed ee mantras anigoo samaynaya mantra u gaar ah ama isticmaalaya, tusaale ahaan Vajra Guru mantra oo ka yimid Padmasambhava.
Maxaad Dayaxa ugaga fikirtaa?
10 Janawari, 2020
Ka-fiirsashada dayaxa ee buuxda ayaa ina siisa fursad aan ku xirno isku-kalsoonaanta kore. Markaynu nimaadno inaan dareenno wax badan oo shucuurtayadu leeyihiin meel ay ku habboon yihiin.
Miyaad dooneysaa inaad barato inaad ka fikirto? Jooji isku dayga!
Nofembar 4, 2011
Miyaad ka warqabtaa inaad si firfircoon ama si is daba joog ah u fekerayso mise waxay kugu aragtaa caqabad kugu filan inaad fadhiisato 15 daqiiqo ama nus saac?
€4.99 €0.00 Gaadiidka dukaamada
€4.99 €2.49 Gaadiidka dukaamada
naftaada ka horeyso
Maxaa ka kooban aragtidaada shaqsiyeed, falsafadaada? Shaqadaadu ma tahay qodob muhiim u ah farxadaada, gurigaaga, hiwaayaddaada, lamaanahaaga iyo qoyskaaga mise waxaad raadineysaa khibrado ... ma jeceshahay inaad safarto oo ma waxaad doorbideysaa inaad waxyaabo cusub si joogto ah u ogaato? Aniga aragtidayda majiro jawaab sax ah ama qaldan, laakiin waxaa jira hal jawaab oo sax ah; adiga kuu gaar ah Ma ku nooshahay riyadaadii? Ama ma ogid sida iyo halka laga bilaabayo. Waxaa laga yaabaa in qodobbadan ay ku siin karaan xoogaa dhiirigelin ah ... bilow.
Kac ka dib dhicitaankaaga oo soco soco
8 Sebtember, 2019
Inaad iska dhaafto wixii hore waa inaad sameyso. Mar dambe ha isku dayin inaad xajiso waxa aadan adeegin. Carrada kaa dambeysa ayaa ku dhici doonta illaa inta laga sugayo in mar kale uu soo kiciyo qofka wax doonka ah. Ma jiraan wax isku mid ah, qofna, maxaase ugu duwanaan doonta adiga. Sidaa darteed, mar labaad kac oo soco, noloshaada sii soco oo ha murugoon. U oggolow naftaada inaad dareento murugo, laakiin sidoo kale u arag gargaarka inay tahay daqiiqad aad ku dhaqaaqdo.
Nofembar 15, 2019
Tababar kasta, aqoon isweydaarsi ama koorso kasta oo aad sameyso waxay la mid yihiin gabal kale oo xujo ah. Mar labaad ayaad wax baranaysaa, waxaa lagugu wajahayaa wax aadan rabin inaad naftaada ku aragto oo xoogaa ayaad dib ugu kori kartaa. Hagahaygu haddaba maahan meesha ugu dambeysa ee la tagayo, waxay la mid tahay sidii aan qayb kale oo nolosha ka mid ah uga helo xujo.
Quwad noocee ah ayaad soo jiidanaysaa?
3 Febraayo, 2020
Calaamadahaaga zodiac ayaa sheegaya wax ku saabsan saameynta tamar marka aad dhalatay. Calaamadahaaga zodiac wuxuu u adeegaa meel bilow ah! Maqaalkan waxaan doonayaa inaan ku sharraxo sida ay xiddigahaasi saameyn ugu yeelan karaan adiga shaqsi ahaan ahaan.
Goormaad ugu dambeysay adigu naftaada inaad la kulanto?
Nofembar 26, 2019
Horumarka ruuxiga ahi wuxuu ku saabsan yahay sawirka weyn oo is-fahamku ma tago xulashooyin! Adigu waad la kulantaa naftaada sidaa darteedna had iyo jeer ma aha wax fudud ama madadaalo ah maxaa yeelay waxaad la kulmeysaa qaybo ka mid ah naftaada, naftaada, taasi way iska hor imaan kartaa.
Dhexdhexaadintu waa awood dabiici ah oo loogu talagalay aragtida dareenka cad ee aad kula xiriiri karto miyirka qofka dhintay. Halkan riix si aad u hesho macluumaad dheeraad ah >
Sheekooyinka cirfiidka ee u horseeda khibrad iimaan
22 Janawari, 2020	Wax jawaab celin ah
Dunida ruuxiga ah waa mid caqli badan oo garanaya sida iyo goorta la helo feejignaan. Maaha in lagu qanciyo, laakiin waa in la rumeysto aaminsanaanta si aad ugu furnaato mucjisooyinka nolosha.
Farxadu waa diin!
Nofembar 21, 2019	Wax jawaab celin ah
'Diin' maaha, laakiin farxaddu waa diinta! Ma aqaano adiga, laakiin markaan la kulmo saaxiibkeyga wanaagsan ayaa iga farxisa.
Edwin waxaa iska leh Ingiriisiga Ururka Qaranka ee 'Spiritualists' (SNU) oo sharciyeysan;
Wuxuu macallin ka yahay CRKBO.
Asturnaanta iyo xuquuqda
Bayaanka cookie (EU)
Bayaanka cookie (US)
© Macluumaadka websaydhkan waxaa lagu soo ururiyey taxadar weyn, hase yeeshe markasta waxaa jiri kara khaladaad ama khaladaad; wax xuquuq ah lagama soo saari karo tan.
Made la ❤ by Qiimaha lagu daray - Edwin van der Hoeven
Dhagsii astaanta astaamaha ku yaal dhinaca midigta sare si aad u furto pop-upkan
Halkan ka dhageyso fikirkaaga maalinlaha ah
Sidoo kale ka hel fikirkaan WAAN MAHADSANAHAY (waxaan-are-one.io)
Dad badan ayaa haysta bilaash Ka fikir fikirka Crown Chakra la soo dejiyey si looga fikiro inta lagu jiro dayaxa oo buuxa. Ma ogtahay in booska dayaxu la xiriiro Chakras? Taasina waa sababta ay u jiraan fikrado kala duwan oo ah 7, midkiiba halkii Chakra.
Pop-up-kan wuxuu muujinayaa fekerka la xiriira booska uu joogo dayaxu.
HSP iyo xasaasiga
Horumar xagga ruuxiga ah
Marabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Ii soo dir macluumaad dheeri ah